आफ्नो फिल्म हेरेर आफैं रोमाञ्चित भएँ- कृष्ण मल्ल :: Setopati
अशेष अधिकारी काठमाडौं, पुस १
त्यो नाटकपछि उनी राष्ट्रिय नाचघरमा आए। उनले विजय मल्ल लिखित 'पहाड चिच्याइरहेछ' भन्ने नाटकलाई राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा निर्देशकका रूपमा सहभागी भए। निर्देशनतर्फको गोल्ड मेडटरमा उनले कब्जा जमाए। उनी कुशल रंगकर्मीमा दरिन पुगे। यतिबेलासम्म राष्ट्रिय नाचघरमा काम गरेको २-३ वर्ष बितिसकेको थियो। नाटकको सिलसिलामा उनको चिनापर्ची नीर शाहसँग भइसकेको थियो। उनीहरूले २०३७ सालमा 'श्री समूह' नामक नाटक समूहको गठन गरे। नीर अध्यक्ष बने भने कृष्ण महासचिव।
श्री समूहले त्यतिबेलामा भारतीय लेखकले लेखेको एक भारतीय नाटकको नाट्य रूपान्तरले त्यतिबेला झण्डै आजकलका नेपाली फिल्मले कमाउने सरी पैसा कमाएको कृष्ण सम्झन्छन्। नाटकको नेपाली नाम 'बनिदिनोस न त' थियो।
यस्तैमा नीर शाह शाही नेपालि चलचित्र संस्थानको डिसीएम नियूक्त भए। संस्थानले त्यतिबेला सरकारी पैसामा फिल्म बनाउँथ्यो। नीरले संस्थानबाट बनिरहेको 'बदलिदो आकाश'मा कृष्णलाई एउटा सानो भूमिका लागि आग्रह गरे। तर उनले त्यो फिल्म कुनै कारणले गर्न मानेनन्।
फिल्मको तयारीका बिचनै नीरले कृष्णलाई 'ल मल्लजी फिल्म त गर्नुपर्‍यो नि नायकको रूपमा।’ कृष्णलाई सपना लागिरहेको थियो। हिरो बन्ने भनेर सुनेको रात उनलाई निद्रै परेन।'
निद्रा परोस पनि कसरी त्यतिबेलामा कम नेपाली फिल्म बन्थे। यस्तोमा उनलाई नीरले हिरोको रूपमा फिल्म खेल्न भनेपछि निद्रा कसरी लाग्थ्यो र? फिल्मको नाम 'वासुदेव' थियो। फिल्म धुर्वचन्द्र गौतमको उपन्यास 'कट्टेलसरको चोटपटक' उपन्यासमा आधारित थियो। त्यतिबेला फिल्मको स्क्रिप्ट मुम्बईका एक लेखकसँग लेखाइमाग्नुपर्थ्यो। नीर नेपाली लेखकबाट लेखाउनुपर्छ भन्ने सोचमा रहेकाले सो कृतिलाई फिल्म बनाउन लागिरहेका थिए।
कृष्ण भन्छन्, 'त्यो बेलामा हिरो हुनु एउटा ठूलो कुरा थियो। फिल्ममा काम गर्नु नै ठूलो उपलब्धि हुने बेलामा फिल्मको हिरो हुन पाउन धेरै ठूलो कुरा थियो। भूमिका के हो कस्तो हो भन्नेतीर लागिएन। म ट्याक्सी ड्राईभर भूमिकामा रहेछु भनेर पछि थाहा पाएँ।'
हिरो हुने भएपछि दंग परेका कृष्णले त्योसँगै आफूलाई परेको एउटा फसाद पनि सुनाउँछन्, 'मलाई गाडी चलाउन आउँदैनथ्यो। तर निर्माण नियन्त्रक गेहेन्द्र धिमालले गाडी चलाउन सिकाउनुभयो। पूरा नजानी नै फिल्मको सुटिङ सुरू भयो। गाडी पूरा नसिकेको नतिजा सुटिङका कारण गाडी झण्डै दुर्घटना परिएन।’
'म आफ्नो फिल्म हेरेर आफैं रोमाञ्चित भएँ। फिल्मबाट प्रशंसा पाएँ। कस्तोसम्म भयो भने त्यसको ह्याङओभर नै १-२ वर्ष होला जस्तो भो’, उनले फिल्म रिलिजपछिको किस्सा सुनाए।
'जागिर खाँदै फिल्म गर्न सकिने अवस्था रहेन। अनि मैले टेलिभिजन छाँडेँ। 'मायाप्रीति' फिल्ममा म अडिसनबाट छनोट भएको थिएँ।'
उनले नेपाल टेलिभिजनका लागि पहिलो टिभी श्रृखंला 'श्री पाँच पृथ्वी नारायण शाह' बनाउने सौभाग्य पाए। भर्खर टेलिभिजन युगमा प्रवेश गरेको नेपाल टेलिभिजनका लागि उनले 'चक्रब्यूह', 'टाढाको बस्ती', 'मार्शल' आदि सिरियल बनाए। ती सबैले दर्शकको मन जित्यो। उनले थुप्रै सर्ट भूमि पनि बनाए।
‘मलाई जागिरको त्यति लोभ मोह भएन। जागिरबाट घर चलाउनुपर्ने थिएन। जागिर त मैले नेपाल टेलिभिज अगाडि ३६ सालमै अस्थायी शाखा आधिकृतको खाएको थिएँ, राष्ट्रिय पञ्चायतमा ३ महिना। कोशिस गरेको भए अर्के हुन्थेँ होला।'
'मायाप्रीति' पछि विस्तारै उनी फिल्मलाईनमा भिज्न थाले। उनी ३ जना व्यक्तिलाई कहिल्यै भूल्न सक्दैनन्। एक नीर शाह थिए, अर्का फिल्म निर्देशक बिएस थापा अनि नाटकमा अभिनय सिकाउने गुरू हरिप्रसाद रिमाल। रिमालले नै कृष्णलाई रेडियो नेपालका रूपक नाटकमा अभिनय गर्ने मौका दिएका थिए।
'मायाप्रीति' मा बिएस थापासँग काम गर्दा उनलाई बेग्लै अनुभव भयो। 'कान्छी' , 'माइतिघर' जस्तो फिल्म बनाएको मान्छेसँग छुट्टै वातावरणमा उनले काम गरे। थापाले हिरोहिरोइनलाई बेग्लै बलिउडको जस्तै व्यवहार स्ट्यान्डर्ण दिनुभयो। त्यही लहरमा उनले 'कोसेली', 'विजय पराजय'मा त्यही लहरमा अभिमनय गरे।
'बुबालाई मैले गरेको काममा त्यति मतलब थिएन। तर बाबु खुशी भएको एउटा क्षण मलाई थाहा छ। राजा विरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य सिन्धुपाल्चोकको एउटा मन्दिर दर्शनमा जानुभएको रहेछ। त्यसको आयोजक कमिटीमा बुबा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। कसैले हिरो कृष्ण मल्लको बुबा भनेर माहारानीलाई सुनाइदिएछ। रानीले बुबालाई बोलाएर तपाईँ हिरो कृष्ण मल्लको बुबा हो? भनेर हालखबर सोधनी भएछ। रानीबाट छोराको बारेमा सुनेपछि बुबा औधि खुशी हुनुभएको थियो। छोराको नामबाट चिनिएकोमा उहाँलाई ठूलो गर्व भयो। त्योबेला बडामहारानीबाट त्यो सोधिनु ठूला कुरा थियो। त्यो उहाँका लागि गर्व गर्ने कुरा भएको थियो।'
हिरोको रूपमा उनी अन्तिमपटक 'बादल' मा अभिनय गरे। उनी फिल्म निर्माताका रूपमा पनि आए। उनले 'गोठालो', 'लगनगाँठो' जस्ता फिल्म निर्माण गरेका छन्।
‘मैले कहिल्यै आफूलाई हिरोकै रूपमा प्रस्तुत गरिनँ र ठानिनँ। त्यो किसिमको लाइफस्टाइलमा म गइनँ। काम गर्नमा पाएको आनन्दलाई नै मैले सर्वोपरी ठानेँ। म आफूलाई साधारण मान्छे सोच्थे', उनी आफैंलाई यसरी मूल्याकंन गर्छन्।
कलाकार भएर पाएको कुरा पहिचान हो। उनलाई त्यसमै खुसी लाग्यो। कुनै व्यक्तिगत काममा जाँदा 'ओहो तपाईँ आफैं आउनुभयो?' भनेर सम्मान पाउँछन्। उनलाई यसैमा खुसी मिल्छ।
'त्यही नै हो। मैले केही साथीभाइलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन सकेँ, केही गर्न सकेँ। त्यो नै मलाई पर्याप्त भयो', उनले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने।
'राम्रो रोल पाए भने समय दिन सक्छु, गत वर्ष 'गाजलु' खेले। त्यो फिल्म मैले नयाँ पुस्ताले कसरी काम गर्छ भन्ने कौतुहलताले गर्दा खेलेँ। नयाँ पुस्ताको स्पिड मलाई मन पर्‍यो। अझै काम गर्ने रहर छ। फिल्म बनाउने सोच पनि छ।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २९, २०७४, २२:०१:२४